Tag: faleebo » Martech Zone
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Barmaamijka Maareynta Xiriirka Macaamiisha Ecommerce wuxuu abuuraa cilaaqaad wanaagsan oo u dhexeeya dukaamada ecommerce iyo macaamiishooda waayo-aragnimo xusuus leh oo horseedi doonta daacadnimo iyo dakhli. ECRM waxay xiraysaa awood ka badan tan Bixiyaha Adeegga Email (ESP) iyo macaamiil-diiradda ka badan madal Maareynta Xiriirka Macaamiisha (CRM). Waa maxay ECRM? ECRMs waxay awood u siisaa milkiilayaasha dukaamada qadka inay hoos u dhigaan macmiil gaar ah — danahooda, iibsashadooda, iyo dabeecaddooda — kuna gaarsiiyaan qibrad macmiil shaqsi ahaaneed baaxad leh iyagoo adeegsanaya xogta macaamiisha la soo ururiyey ee marin kasta oo suuq geyn ah oo isku dhafan.
Jimco, Nofeembar 13, 2020 Axad, Disembar 13, 2020 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 7 daqiiqo Sida loo qiimeeyo loona helo adeegyada xaqiijinta emaylka ugu wanaagsan shabakadda. Waa kuwan liistada faahfaahsan ee bixiyeyaasha iyo sidoo kale qalab aad ku tijaabin karto cinwaanka emaylka midig maqaalka.
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Marka la eego xukunka WordPress sida nidaamka maareynta maareynta, waxaa la yaab leh sida fiiro yar ee dhab ahaan loogu bixiyo barxadda aasaasiga ah ee is-beddelka dhabta ah. Ku dhowaad daabicitaan kasta - hadey tahay ganacsi ama baloog shaqsiyeed - waxay u egtahay inay u beddeleyso martida macaamiil ama rajooyin. Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii ma jiraan waxyaabo ka mid ah barxadda aasaasiga ah ee la qabsan kara hawshan. Beddelaadda Pro waa boggag WordPress ah oo dhammaystiran oo bixiya tafatiraha jiita & tifaftiraha, jawaabta moobiilka
Monday, July 13, 2020 Sabtida, Oktoobar 24, 2020 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Websaydhyada ku daraya boodhadhka caddaynta bulshada ee tooska ah waxay sare u qaadaan sicirka beddelaaddooda iyo kalsoonidooda. Pulse waxay u saamaxdaa ganacsiyada inay muujiyaan ogeysiisyada dadka dhabta ah ee wax ka qabanaya boggooda. In kabadan 20,000 oo boggag ah ayaa adeegsada Pulse oo hela celcelis beddelid ah 10%. Goobta iyo muddada ogeysiisyada si buuxda ayaa loo habeyn karaa oo, inta ay soo jiitaan dareenka booqdaha, kama jeediyaan feejignaanta ujeedka booqdaha uu u joogo. Waa qurux
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Mid ka mid ah macaamiisheennu wuxuu ku jiraa Squarespace, oo ah nidaam maareyn maareyn oo bixiya dhammaan aasaasiga - oo ay ku jiraan ecommerce. Macaamiisha iskaa wax u qabso ah, waa madal aad ufiican oo xulashooyin badan leh. Waxaan inta badan kugula talineynaa marti gelinta WordPress sababtoo ah awooddeeda aan xadidneyn iyo dabacsanaanta… laakiin qaar ka mid ah Squarespace waa xulasho adag. In kasta oo Squarespace ka maqan tahay API-ga iyo malaayiin isku dhafan oo wax soo saar leh oo diyaar u ah inay socdaan, haddana waxaad weli ka heli kartaa qaar ka mid ah aaladaha cajiibka ah ee lagu hagaajinayo bartaada. Anaga